I-Romantic overwater tahitien bungalow
(164 okushiwo abanye)
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Marika
Sizojabula ukukwamukela e-Vairao, endaweni encane emangalisayo futhi ethule ku-8 km ukusuka e-Teahupoo, eduze nolwandle oluhle lwesihlabathi esimhlophe. Ukubhekana ne-lagoon, abathandi be-waterports bayojabula : i-surf (indawo ye-surf engu-5), ukuhamba kwemikhomo, ukutshuza, i-snorkeling, i-kayak, i-va'a (i-polynesian pirogue), i-aquabike, .. Enkabeni ye-Tahiti-boat "tahitiititourandsurf", wena uzokwazi ukujabulela izinkambo ezihlukene esizinikezayo. Woza uthole le ndawo encane yepharadesi.
Yindlu enethezekile neyothando phezu kwamanzi enesitezi esikhulu lapho ungabuka khona i-fish ballet. Uzothola ikhishi elihlome ngokuphelele, ibha, i-hamac, igumbi lokugezela elikhulu, igumbi lokulala abantu ababili, i-mezzanine enombhede wabantu ababili kanye nemibhede emi-2 elula. Uzoba nengadi ene-BBQ. Uzoba ne-wifi yamahhala. Sifuna uzizwe usekhaya. Singakunikeza wonke amagiya e-snorkeling, ama-kayak, i-polynesian pirogue, amabhayisikili, ukudoba, igalofu, ....
Umbhede omkhulu ongu-1, umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2
4.91(164 okushiwo abanye)
4.91 · 164 okushiwo abanye
I-peninsula, iTahiti iti, ilondolozwe kakhulu, sengathi isikhathi sasimile. Abantu bahle ngendlela emangalisayo futhi bamukelekile. Emamitha ambalwa ngemva kwendlu, uzothola isitolo segrosa, isiteshi se-gaz, umshini wemali, umbukiso wezandla, ihhovisi leposi, indawo yokudlela evamile, ichweba elincane lokudoba (nezinhlanzi ezintsha nsuku zonke) nokuningi.
Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kube yisikhathi ongasoze wasikhohlwa. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, sizotholakala. Ungangabazi ukusicela izeluleko noma yini. Sizokunikeza amathiphu nezindawo ongazithola.